Mabhuku - Zvinyorwa Nhau | Zvinyorwa Nhau (Peji 3)
Mai vanosvika uye musika wekutsikisa unoramba uchishanda, kunyangwe pahafu gasi. Aya mavhiri mashanu akasarudzwa uye akarongerwa mwedzi uno.
Aya maBhaibheri maviri eIzita reRose, rakanyorwa naUmberto Eco, uye Usataure Nevatorwa, naHarlan Coben, ave kutepfenyurwa paterevhizheni.
Kuongororwa kwemanovel ekuMadokero ayo akazove anozivikanwa zvakanyanya mafirimu eiyo genre, senge Centaurs yemurenje kana Kuenda nemhepo.
Moby Dick inyanzvi. Melville inopinda mukunyanyisa uye kutsiva uye zvinhu zvakaoma muhukama. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Tsvaga mabhuku atinokurudzira kuti tipe pazuva reBhuku. Zvirokwazvo iwe unenge uchitaura chokwadi kana iwe ukafunga nezve kuraira kwatinokusiira iwe.
Arkady Renko ndiye mutikitivha mukuru mune akanyanya kuzivikanwa akateedzana ezvinyorwa nemunyori weAmerica Martin Cruz Smith. Uku ndiko kuongorora kwako.
Chokwadi Icho Nezve Harry Quebert Affair ndeye kudakadza kudanana. Joël Dicker akabvisa zano rakanaka nekukanganisa kukuru. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iwo maSatanic Mavhesi, rimwe remabhuku anokakavara munhoroondo yazvino yekushandisa kwayo kwakanyanya kweIslam. Huya, verenga nezve basa uye munyori waro.
Idzi dzimba ndidzo protagonists dzenyaya dzakawanda mukuwedzera pakuisa iwo. Aya ndiwo mamwe mazita ekuverenga kana kurangarira munguva dzekuve pamba.
Kune vanhu vazhinji avo, gore, vasingakwanise kuverenga rinopfuura rimwe bhuku, uye dzimwe nguva kunyangwe zvishoma. Naizvozvo, tinokurudzira dambudziko rekuverenga.
Javier Marías, munyori ane chinyoreso chakanakisa uye kufungisisa kwakadzama kwenyika. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Nhasi ndiri kutaura naMaría Oruña, uyo anotipa iyi bvunzurudzo mushure mekuburitsa bhuku rake razvino, The Forest of the Four Winds, kwaanotaura zvishoma nezve zvese.
PaZuva reInternational Revana nevechidiki Zuva reBhuku ini ndinoongorora basa uye chimiro chaJuan Muñoz Martín, wepamoyo wenguva iyoyo werudzi.
Mabhuku ari pasherufu atinavo tese kumba atora nzvimbo yekumusoro mazuva ano. Zvakakosha zvekare, zvinyorwa zvisingagumi uye kuunganidzwa.
Jo Nesbø anotendeuka makumi matanhatu nhasi. Munyori weNorway anovhura gumi rake rechitanhatu uye pano achauya mabhuku ake anotevera: Ropa muChando uye Pakati pehusiku Zuva.
Chitsuwa chiri pasi pegungwa chinorondedzera kurwira rusununguko rwaTete. Iri bhuku rinofukidza makore makumi mana ezviitiko zvakashata. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Kuguma Kwerufu chikamu chechitatu mune epic Nhatu Muviri Trilogy yakanyorwa naCixin Liu. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iyo Dreyfus Nyaya Mabhuku
Iyo Dreyfus nyaya yaive yakashata nhoroondo, kuratidzira kweanopokana neSemitism muEurope mukupera kweXNUMX uye kutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Huya udzidze zvakawanda nezvazvo.
Makamuri akavharwa. 6 zvakavanzika zvemapurisa kuongorora
Nhasi kune zvakavanzika zvemapurisa emakamuri matanhatu, iro sosi rinoshandiswa nevanyori vemhando dzakadai saAgatha Christie kana John Dickson Carr.
Mabhuku aJuan Gómez-Jurado
Mabhuku aJuan Gómez anofukidza marudzi akasiyana siyana (zvinonakidza zvevakuru, vechidiki uye akateedzana evana). Uya udzidze zvakawanda nezvemunyori uyu nemabasa ake.
Mabhuku aElvira Lindo anongedzera mumabhuku epasirese evana epasi nenzira yavo yakasarudzika. Huya udzidze zvakawanda nezvake nebasa rake.
Mabhuku aJavier Castillo ave chiitiko chepasirese nekuda kwezvavakafunga uye kutsauka kusingatarisirwe. Uya udzidze zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
Iye munyori weGalician Pedro Feijoo anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura nezve mabhuku ake, vanyori vaanofarira uye zvinofurira uye nezvimwe zvakawanda.
Ines naJoy chikamu chesaga yakanangana ne "kurwira kusingaperi kwerusununguko" muSpain yapashure pehondo. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Juan Eslava Galán ane zuva rekuzvarwa. Ini ndinoongorora mamwe mazita ebasa rakakura remunyori uyu kubva kuna Jaén werudzi rwenhoroondo rwunozivikanwa nekuverengwa.
James Ellroy, iyo Mad Dog kubva kuAmerican crime novel, anotendeuka makumi manomwe nemaviri nhasi. Saka pane atove mashoma ...
Chiremba wekumaruwa chinyorwa chinosangana nemuverengi. Mutauro wake wakajeka kwazvo, zvinosiya kusahadzika kuti chaive chaicho here kana kwete Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Kurume kuri kuuya uye aya ndiwo mashanu edhisheni enoveli, enhoroondo uye ezvinyorwa zvinyorwa pakati pemamwe mazita akasainwa naElvira Lindo kana Pere Cervantes.
Henry James akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1916 muLondon. Wongorora 5 enhau dzake dzinomiririra dzakaitwawo muinema.
Mabhuku aJosé Saramago
Mabhuku aJosé Saramago ndiwo manyuko eruzivo. Uya udzidze zvakawanda nezve basa remunyori, mutori wenhau, munyori wenhoroondo uye munyori wemitambo.
Mabhuku aMiguel de Unamuno anomiririra hupfumi hukuru hwevanhu. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Zita remhepo rinotungamira muverengi kuburitsa nhoroondo yeKvote, pakati pekufungidzira nezvakavanzika. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Isu tinotanga Kukadzi tichiratidza aya mabhuku manomwe ekunyora kubva kuvanyori vanomwe vakasiyana kwazvo, asi nenyaya dzakanaka dzezvakasiyana siyana.
Fahrenheit 451 inokuisa iwe mune ramangwana redystopi uko simba rinoshandiswa nekuparadza mabhuku. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iyo saga yeiyo yakagara-yakareba ibasa rakanakisa uye rakaomarara rakaburitswa muzvikamu zviviri. Huya udzidze nezvechimiro chayo chekuputira uye munyori wayo.
Ramón del Valle-Inclán aive mutambi wemitambo wechiSpanish, mudetembi uye munyori wenhau, dziviriro yezvinyorwa zveSpanish zvezana ramakore rechiXNUMX. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Rima Sango ibhuku rechipiri muTatu Bodies Trilogy rakagadzirwa naCixin Liu. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori.
Iyo Martian ibasa rakanyorovera iro rinokutora iwe kuti riite mutambo wemurume akasiyiwa paMars. Huya udzidze zvakawanda nezve rangano yaro nemunyori wayo.
Wilkie Collins akaberekerwa muLondon pazuva rakaita nhasi muna 1824. Munyori wenhau akabudirira wechiVictorian, ndiye akafanotungamira bhuku remutikitivha. Ini ndinoongorora mamwe emabhuku ake.
Raquel anouya kuNovariz kuti atsive, ipapo anodzidza kuti achatsiva mumwe munhu akafa zvisinganzwisisike. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iyo novel inotitorera kune chaiko uko kwekutanga kusangana mutorwa kunoitwa, asi nezvisatarisirwa mhedzisiro. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Wechidiki uyo anoverenga anogara achivandudza kufunga kwake, kutarisisa kwake uye neshoko rake. Huya uone mabhuku echidiki e6 akagadzirwa iwe.
Paunopa bhuku, haungopi bhuku chete
Paunopa bhuku, iwe haungopi bhuku rimwe chete. Magi arikuuya. Ipa mabhuku. Ivo ndivo akanakisa uye ekupedzisira zvachose.
Roald Dahl Mabhuku
Mabasa emunyori weWales uyu mutero kune kugona uye kufungidzira, nezvitsva uye zvinonakidza zvirongwa. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nemabhuku ake.
2020 inotanga.Gore idzva rinozove zvakare rizere nemagazini enhau emhando dzese. Iyi mimwe yemwedzi wekutanga waNdira.
Kusarudzwa uye chiyeuchidzo cheimwe yeakanakisa echinyakare echinyorwa ezvinyorwa zvekare paTV, senge Fortunata naJacinta kana Los pazos de Ulloa.
Kisimusi iri pamabhuku. 6 dzakasiyana nyaya dzevateereri vese
Kisimusi kunyangwe mumabhuku. Aya ndiwo mazita ematanhatu evateereri vese, kubva kuna Agatha Christie kuenda kuna Astrid Lindgren.
Mabasa emunyori aya anotangira pakutsvagisa kwezvakaitika kare kuenda kuzvinyorwa zvekunyepedzera uye zvinyorwa zvebhaibheri. Huya uzive zvakawanda nezvake.
Bhuku richagara riri chipo chakanaka, heino runyorwa rweakanakisa enganonyorwa muSpanish mumakore achangopfuura. Huya usangane navo nevanyori vavo.
Kisimusi yasvika uye yakakosha echinyakare eaya mazuva anodzoka. Nhasi ndiri kutaura nezveGrinch, musikana mudiki wemutambo naMnu Scrooge.
Chipoi cheKisimusi chiri nani pane kupa mukana wekudzidza kubva kuhupenyu hweavo vakaita nhoroondo? Huya udzidze zvakawanda nezvevanhu ava.
Musoro wechitatu wechitatu Star Wars trilogy inosunungurwa. Uye iro Simba ratiperekedza kwemakore makumi mana nemaviri rinoverengwawo.
Jane Austen akaberekwa musi waDecember 16, 1775, muSteventon. Chirevo cheVictorian Romanticism, uku kusarudzwa kwezvimedu uye zvirevo kubva kubasa rake.
Mabhuku naChristian Gálvez
Chistian Gálvez munyori akasarudzika mumufananidzo waLeonardo Da Vinci uye akazivisa nerudo neRenaissance. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Zvita ari kuuya uye dzimwe dzinonakidza dzemapepanhau dzinobuda. Nhasi ndinoratidzira aya mana anoratidzwa kune vadiki uye ma cinematographic vaverengi.
Frank Yerby aive akakurumbira muAmerican American nhoroondo yemunyori munyori. Akafa pazuva rakaita nhasi kuMadrid. Aya ndiwo mabhuku ake akanakisa.
Cenital ibhuku rekuvandudza iro ndere genre rinotsanangurwa se "yesainzi-yemamiriro ekunze novel." Huya udzidze zvakawanda nezve iri basa uye munyori waro.
Cinderella inyaya inozivikanwa yakafukidzwa neThe Brothers Grimm naCharles Perrault. Uya udzidze zvakawanda nezvekwakabva nhoroondo uye nebasa pacharo.
Lev Tolstoy akafa munaNovember 20, 1910. Aya mitsara makumi maviri neshanu akasarudzwa kubva kubasa rake uye akafunga kumurangarira pazuva iri.
Pazuva rakafanana nanhasi, muElinburgh, Robert Louis Stevenson, tenzi weruzivo rwechiitiko, akazvarwa. Ndinomuyeuka aine nhetembo nhatu dzakasarudzwa pabasa rake semudetembi.
Makore makumi matatu apfuura kubva pakadonha Rusvingo rweBerlin. Aya ndiwo mabhuku matanhatu enhau dzakasiyana uye nguva muguta guru reGerman.
Iri basa rekunyora ndiyo yepedyo uye isina kuchena ratidziro yemakakatanwa akaomarara akakanganisa vanhu veBasque. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Uku ndiko kuongorora kwangu kwega kweCuchillo, iyo yazvino nyowani naJo Nesbø, chikamu chegumi nembiri mune akateedzana nemuridzi Harry Hole.
Yedu sarudzo yemanonyorwa enhau anofukidza ese iwaya erudo nyaya anokodzera kuverengerwa kamwechete kamwe muhupenyu.
Mabhuku aVirginia Woolf mabasa eantant-garde ehuremu hwakakura hwekunyora hwakaratidza nguva. Uya udzidze zvakawanda nezvemunyori wenyaya nezviri mukati mayo.
Iyo Dutu remhepo idrama yekuregerera uye kudzikinura ine mavara akanyatsogadzirwa akarukwa pamwechete. Huya udzidze zvakawanda nezve rangano yaro nemunyori wayo.
Mbudzi iri kuuya uyezve kune makuru maratidziro nevaparidzi uye pamberi pechirongwa cheKisimusi. Aya ndiwo mazita matanhatu.
Iwo maSilmarillion akauya kuzotsanangura cosmogony yeThe Lord of the Rings; ibhuku rakaisvonaka uye rakaoma kunzwisisa. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Vakaputeni vegungwa ndivo protagonists ezvizhinji zvekunyora zviitiko zvenguva dzese. Aya ndiwo mashoma andinoyeukawo kumamuvhi.
Iyo isingagumi nyaya ingano inonamira mukukosha kwekufungidzira uye nekukuvadza kwekusuwa. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Nezuro ini ndanga ndiri pamutambo wekuvhura Liber 2019. Ndakataura nemunyori Beatriz Osés nezve yake nhepfenyuro yevechidiki achitarisa Erik Vogler.
Ichi chiitiko chitsva chekufa kwemunyori weAustralia, Morris West. Ini ndinoratidzira mamwe emabasa ake ane mukurumbira.
Kuwedzera mumabhuku evechidiki kwave kwakasimba mumakore achangopfuura, nezvirongwa zvaro zvinokwezva vechidiki. Huya udzidze zvakawanda nezve aya mabasa uye vanyori vawo.
Mumvuri wecypress wakareba, mupeni reMiguel Delibes, inotiratidza nyaya yekurwa uye kukunda. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori.
5 nhau dzaGumiguru. Nhoroondo, kufungidzira uye… Harry Hole
Gumiguru uye matsutso ari kuuya uye pamwe navo akawanda anonakidza edhisheni nhau. Ini ndinoongorora idzi 5 dzakasainwa naJJ Benítez, D. Redondo kana J. Nesbø.
Irene Villa: mabhuku
Irene Villa akapona nehugandanga, chiratidzo chakajeka chekuti, kunyangwe zvodii, unogona kuenderera mberi. Huya udzidze zvakawanda nezvebasa rake uye nehupenyu hwake.
NeChishanu chapfuura ndaive mumusangano wakasarudzika naJames Ellroy, munyori mukuru weAmerica wenhoroondo yekupara mhosva. Iyi ndiyo nhoroondo.
Inotorwa serimwe remabhuku akanakisa, William Goldman's The Princess Mwenga inosanganisa kufungidzira, kudanana uye kuseka mune imwe nyaya.
Goho rinosvika munaGunyana. Uye zvinyorwa zvakare zvinokohwa akawanda mazita pamusoro payo, waini uye zvese marongero ayo. Ava vashanu vavo.
Ini ndinotarisa kune mamwe akanakisa echikadzi anotungamira ayo epanhasi matsotsi novel akaburitsa uye ayo akakosha kuwana.
Iyo Baztán Trilogy saga naDolores Redondo inorondedzera mhosva dzisingazivikanwe idzo Amaia Salazar anofanira kugadzirisa. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Ndizvozvo. Chikoro chinotanga zvakare. Kosi nyowani uye kuverenga kwakawanda kumberi. Aya mabhuku mashanu ekuti kudzoka kwacho kutakurike.
7 yekugadzirisa nhau dzaGunyana. Biography, komiki, nyaya ...
Nyamavhuvhu ari kuuya uye kune anonakidza kwazvo edhisheni nhau kubva kumazita makuru saEllroy, King kana Gabás. Tinotarisa izvi zvinomwe.
Mabhuku aDolores Redondo akaita kuti nyika yemabhuku idedere, kunyanya kubva paakasvika kubhaisikopo. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Iwo makore zana kubva kuberekwa kwaFrancisco García Pavón, munyori weTomellos akagadzira Plinio. Uku ndiko kuongorora kupfupi kweVoces en Ruidera.
Muti wesainzi, naPío Baroja, nderimwe remabasa ake makuru uye zvekare ezvinyorwa zvemunyika futi. Nhasi ndinounza ongororo pfupi nezvazvo.
Kunze uye kwakasiyana, Palmeras en la Nieve naLuz Gabás ibhuku rerudo rakaiswa muFernando Poo, muSpanish yekare yeGuinea.
Nhasi ndinowongorora Mwenje weBohemian, iyo yakasarudzika uye yekutanga inotyisa naRamón María del Valle-Inclán, ayo isu tese takaverenga zvechokwadi.
Washington Irving ndomumwe wevanyori vekuAmerican vekare vezana ramakore regumi nemapfumbamwe. Uku kuongorora kwechimiro chake uye kunoshanda.
Hiroshima. 6 Nyamavhuvhu. Mabhuku mashanu ekurangarira.
Hiroshima. Nyamavhuvhu 6 ne5 mabhuku ekurangarira zuva risingafadzi sevamwe vashoma munhoroondo yeHumanity. Kuverenga kwekufungisisa.
5 nhau dzekuverenga muna Nyamavhuvhu. Zvishoma zvezvose.
Nyamavhuvhu, muenzaniso mukuru wezororo. Aya ndiwo mashanu edhisheni enhau ari kubuda mwedzi uno. Iyo nyowani kubva kuFalcones kana iyo Millenium yakateedzana pakati pevamwe.
Nhasi iri imwe yenyaya dzemhando dzakasiyana siyana: gothic, Victorian, dema, erotic uye republican. Uye kubva kune vakasiyana vanyori kubva panguva dzakasiyana.
Swiss munyori Erich Von Däniken inyanzvi mumabhuku ekunze ekunze. Nhasi ndinotarisa mashoma.
Mwedzi. 7 kuverenga pamusoro pemakore makumi mashanu mushure mekukunda kwake muna Chikunguru 50, 20. Idzi inyaya nomwe nyaya dzakasarudzwa dzakatenderedza nzira yake.
Ropa Muchato, iyo chete yemitambo naFederico García Lorca yakashandurwa kuita bhuku, inotipinza munjodzi yepasirese yakazara nechiratidzo chemunyori wayo.
Frederick Marryat aive Kapteni weMarine muBritish Royal Navy muzana ramakore rechi5. Aivewo munyori wemanovhiri enoveli. Ava vashanu vavo.
Muchikamu chino chechipiri chakatsaurirwa kumufananidzo waEl Cid, ini ndinoongorora mazita mashanu emazano uye nhoroondo pamusoro pake nevanyori vakasiyana.
5 matsva enhau nhema. Knox, Fitzek, Banalec, Bagstam naHarper
Chikunguru chinotanga. Ongorora zvishanu zvitsva zvematsotsi eruzivo, akakodzera mhando yeiyo infernal kupisa kweaya mazuva. Ivo vanobva Knox, Fitzek, Banalec, Bågstam naHarper.
Pakati paJune 23 na24, 1314, Hondo yeBannockburn yakaitika, umo ...
Ndiwo here makumi maviri nemashanu epamusoro eBritish enganonyorwa enguva dzese? Zvichida, asi kwekuravira hapana chakanyorwa. Ndiri kuona zvavari.
Francis Drake. 6 mabhuku nezveakakurumbira echirungu corsair. Kuziva nezve hupenyu hwake uye nyaya dzake uye zvakanangwa kune vese vateereri.
Juan Sin Tierra. Kuverenga nezve hama yaRicardo Corazón deLeón
Juan Sin Tierra akasaina zuva rakaita nhasi muna 1245 iyo Magna Carta, hwaro hwerusununguko rwebumbiro muEngland. Ini ndinoongorora zvishanu kuverenga pamusoro pechimiro chake.
John Wayne. Mabhuku matanhatu ekuverenga nezvenhoroondo yeHollywood
Vakamubhabhatidza iye Marion Michael Morrison, asi nyika yakamuziva saJohn Wayne. Nhasi akashaya muna 1979. Aya mabhuku matanhatu ekumurangarira.
Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia, Monfort, Hess, Del Val ... Ndiwo mazita evasori vatengesi vatatu vemwedzi ino.
Muchinda Muchinda: sarudzo yekutangisa mwana wako pakuverenga
Kuverenga ndechimwe chezvinhu zvakakwana uye zvinodiwa kudzidza zviwanikwa. Isu tinokuudza iwe kuti nei kutanga neThe Little Prince kunoguma mune chimwe chinhu chakasiyana.
Chuck Palahniuk's Kurwira Kirabhu
Chii chiri Kurwira Kirabhu nezve? Pinda uye uzive zvese nezvenyaya iyi inoongorora maitiro emurume wemazuvano anoenderana neruvengo nekutenga zvinhu.
Mwedzi mutsva uye mashoma ekugadzirisa nhau ayo akatotangwa ezhizha. Aya ndiwo manomwe akasarudzwa kubva pamhando dzakasiyana.
Basa raMiguel de Unamuno, zviri pachena, ndeimwe yeakakwana uye akazara mumabhuku anotaura chiSpanish. Huya uzive zvishoma nezvake.
Mabhuku manomwe eSeneca ehungwaru anopa kuraira kukuru kwezuva nezuva kune avo vanoaverenga. Uyai muzive zvishoma nezvazvo.
Isu tinotaura newe zvakadzama nezve Kudada uye Kufungira zvisizvo, rimwe remabasa makuru ezvinyorwa zvepasirese akasvika muna 1913 kutsanangudza basa revakadzi.
Game of Thrones yakapera mune yayo terevhizheni vhezheni, asi iye mugadziri, George RR Martin, anotaura nezve magumo ayo zvakanyanya kuwanda uye zvakadaro zvichazonyorwa.
Aya ndiwo mashanu emabhuku matsva pane vaimbi nevaimbi. Zvimwe zvinoratidza kana nhoroondo dzehupenyu uye zvimwe zvinonamata kune avo trajectories.
Literania neBhuku Fair ndidzo zviitiko zviviri zvakakosha zvekunyora muMadrid kwehafu yepiri yemwedzi uno waMay. Isu tinotarisa.
Yakaburitswa muna1996 uye yakakunda, Frank McCourt's Angela's Ashes anoongorora hupenyu hwemunyori mudiki weIrish.
Musi waMay 14, 1925, Sir Henry Rider Haggard, munyori wechiRungu, munyori wemabasa akakurumbira seKing Solomon's Mines, akafira muLondon.
Rimwezve gore kuyeukwa kwekuzvarwa kwaCamilo José Cela kunopembererwa Ini ndinosarudza zvimwe zvezvikamu zvake zvisingakanganwike nemitsara
Akakurudzirwa nemunyori wenhau, Gabriel García Márquez Chronicle yeRufu Rwakafanotaurwa nderimwe remabasa makuru eColombia Mubayiro weNobel.
Mabhuku mashanu muna Chivabvu 5, 2 nemaonero ayo
Musi waMay 2, inoyeuchidza kumukira kwevanhu veMadrid vachirwisa mauto eFrance ekugara. Aya mabhuku mashanu pamusoro pemazuva iwayo.
6 hombe-zita rezita rekugadzirisa muna Chivabvu
Chivabvu anotanga uye akawanda anonakidza mazita anoburitswa kune mumwe mwedzi. Kune vanoda matema uye enhoroondo enganonyorwa, aya matanhatu evasanangurwa.
PaZuva reBhuku ini ndinonyora nezvekunyora mune mashoma mafungidziro mushure mehupenyu hwese ndichiisa mazwi pamwechete kuti ndizviudze ini uye nditaure nyaya.
Iyo Trojan Horse saga, naJJ Benítez, yatove nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa. Nhoroondo, sainzi ngano, kutenda ... Kuongororwa kwekuverenga kwakanyanya.
Iyo Prado Museum inoshandura makore mazana maviri ekuberekwa. Mabhuku manomwe nezvake.
Iyo Prado Museum inopemberera ayo mazana maviri emakore enhoroondo iyi 2019. Ini ndinosarudza mabhuku manomwe evaverengi vese nezveimwe yeakanakisa maallari munyika.
Hupenyu hwehupenyu hwaLiudmila Pavlichenko hunoburitswa, uye zviyeuchidzo zvaVasili Záitsev, vaviri vevanozivikanwa vekuRussia snipers veWWII, vanoburitswazve.
Mazita madema: Carmen Mola, Dean Koontz naStina Jackson
Mazita maviri akakosha pane yazvino nhema nzvimbo inodzoka: Carmen Mola naDean Koontz. Uye yazvino Nordic phenomenon debuts: Stina Jackson.
Musi waApril 2, zuva reInternational Children's uye Youth Book Day rinocherechedzwa. Aya maverengi matanhatu evaverengi vadiki vemba.
Kubvumbi kunotanga, mwedzi webhuku. Aya ndiwo matanhatu edhisheni enhau kubva kumazita akaita saAramburu, Vila-Matas, Márkaris kana Clara Sánchez.
Domingo Villar akapa yake nyowani nyowani, Yekupedzisira Chikepe, muMadrid mushure memakore gumi ekumirira. Ini ndinoongorora chiito nebasa rake, iyo trilogy yaInspector Caldas.
Ikozvino yave mukana weavo "vakaipa" mapurisa nevanoongorora kana, ngatitii, vasingateedzere mirau, vane hunhu hwamarudzi ese uye havasi muenzaniso zvachose.
Lejarza, Gistau naPérez-Reverte. Chinhu chitsva kwazvo pamusoro peSpain
Nhau dzaMikel Lejarza, David Gistau naArturo Pérez-Reverte vatove mumigwagwa. Mazita eanonyanya kunyora mabhuku uye chikamu chakasviba cheSpain.
1. Imwe ye "akanaka" (kana akaruramisa) mapurisa nemapurisa
Chinyorwa chekutanga chakapihwa kune avo mapurisa uye vanyori vekutsvagurudza sevakamira sezvo ivo vakanaka uye vachishanda saServaz, Fabel, Bolitar, Betti, Munch naCaldas.
Rimwezve gore muna Kurume 8, Zuva reVakadzi reNyika Dzepasi Pese rinocherechedzwa pasi rose. Nhasi ndinounganidza makumi matatu emitsara yezvinyorwa pamusoro pavo.
Kurume kuri padhuze nekona uye ndiri kutora 5 nyowani nyowani edhisheni kuti iburitswe mwedzi unouya. Kune ese kuravira.
Nhasi ndiri kutaura naVictor Irún, mudzidzisi pane chimwe chikoro muMadrid, kwaanodzidzisa vadzidzi veESO neBaccalaureate nezve kudzidziswa kwemabhuku nhasi.
5 eangu akakurumbira rudo vakaroora mune zvinyorwa
Valentine ari pano zvakare uye pazuva rakadai ndinotarisa pavatanhatu vane mukurumbira mune rudo mune zvinyorwa.
Mariano José de Larra. 30 mitsara yechirangaridzo chako.
Mumiriri mumiriri weSpanish Romanticism, Mariano José de Larra akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1837 kuMadrid. Aya makumi matatu emitsara yake yekumurangarira.
Fran Zabaleta: Kudzokera mukati meSpain mumazuva makumi masere. Nevan.
Chii chinoitika kana munyori akatora bhegi rake, kombi oenda parwendo? Iwe unonyatso ziva nyika yako? That…
Hávamál. Nhetembo yedzidziso dzaOdin. 25 zvirevo
Nhasi ndiri kutaura zvishoma nezveHámavál, iro bhuku redzidziso nehungwaru hwamwari weNordic par kugona, Odin. Kuunganidzwa kwemazano eiyo yakanaka Viking.
Jack London. Chirangaridzo chekuzvarwa kwake nemamwe mazwi ake
Isu tinopemberera rimwezve gore kuberekwa kwaJack London, mumwe wevanyori vanonyanya kuzivikanwa venhoroondo yekushanya. Ndinomurangarira nemamwe mazwi ake.
Isu tinozvinyudza mune yakasviba nyika yezvinyorwa zvevanyengeri kuburikidza nehupenyu uye mabhuku akanakisa aMegan Maxwell.
Segore rega rega, Ndira 1 ndiyo nguva apo mabasa evamwe vanyori uye vagadziri zvakajairika achipfuura munzvimbo yeruzhinji.
Yedu sarudzo yemabhuku gumi akanakisa egore 10.
Isu takagumisa gore nesarudzo yemabhuku gumi akanakisa e2018, ayo anofanirwa kunzi chaizvo, iwo gumi mabhuku ...
Bhuku reJungle. Ruyard Kipling's classic iyo inogara ichidzoka
Bhuku reJungle. Iyo Ruyard Kipling classic inogara ichidzoka. Iye zvino mune imwe nyowani, yakasviba vhezheni yeiyo cinema. Tinoongorora zvimwe.
Vatatu vatema vekare. Zvekubira, maposta nemasango.
Nhasi ndinoongorora zvitatu zvevatema zvinyorwa: Akapambara Akakwana, The Postman Anogara Achidana Kaviri, uye Iyo Asphalt Jungle.
Arturo Pérez-Reverte. Makorenda makumi matanhatu nenomwe. Hindsight yangu
Arturo Pérez-Reverte anotendeuka makumi matanhatu neshanu munaNovember. Mumwe wevanyori vandinoda kwazvo, mune ino chinyorwa ini ndinoita kutarisa kwangu pabasa rake uye chimiro.
Kunyora, zvinyorwa, mabhuku ... 40 kuratidzira kwevanyori
Wawa. Iyo nguva inokoka kuratidzira. Uye aya makumi mana kubva kuvanyori vakasiyana pane hunyanzvi, hobby kana kuda kunyora.
6 akasiyana evana uye evechidiki kuverenga kune iyo yechando inotonhora
Heano matanho matanhatu akasiyana kwazvo evana nevechidiki kuverengera aya anotonhora mazuva ematsutso. Comics saEl Jabato, asi zvakare mazita saJudith Kerr.
Biography uye akanakisa mabhuku aCharles Dickens
Tinozvinyudza muhupenyu uye mabhuku akanakisa aCharles Dickens kuti tiongorore zvakavanzika, hurombo uye tariro yeVictorian London.
Isu tinozvinyudza muhupenyu uye mabhuku akanakisa aEduardo Mendoza, mumwe wevanyori vakakura veSpanish venguva yedu.
Raibhurari Zuva. Kubvunzana nemutungamiriri waMario Vargas Llosa
PaZuva reLaibhurari ndinotaura naRamona Serrano Posadas, director weMario Vargas Llosa Municipal Library, muLa Solana (Ciudad Real).
Oscar Wilde. Nguva dzose shasha. Zvidimbu zvemabasa ake matatu
Nhasi uno mucherechedzo mutsva wekuzvarwa kwaOscar Wilde, mumwe wevanyori vane mukurumbira mumabhuku. Kune zvikamu zvitatu zvemabasa ake.
Rimwezve gore iro rekare nerekare bhuku reratidzo reMadrid riri kuitwa. Ikozvino yava 30th edition uye iri paPaseo de Recoletos.
Vikings. Maguta mashoma ane mukurumbira, anokurudzira ngano uye ngano. Classics muNhoroondo yeHumanity iyo isingabude muchitaera nenzira ipi neipi.
7 akasiyana kwazvo matsva enhau dzematsotsi muna Gumiguru
Muna Gumiguru tinowana mazita matsva ematsotsi emabhuku andinoongorora pazasi. Mazita saMosley, Perry, Katzenbach, Mikel Santiago kana Pérez Gellida.
Makore zana kubva pakapera Hondo Yenyika Yekutanga. Mabhuku manomwe ekumurangarira.
Chirangaridzo chekuguma kweHondo Yenyika Yekutanga kana Hondo Huru iri kuswedera. Uku ndiko kuzvisarudzira kwangu kuzvininipisa kwekuverengwa pachiitiko chinotyisa ichocho.
Dan Brown Biography uye Akanyanya Mabhuku
Kunyudza muhupenyu hwaDan Brown uye mabhuku akanakisa zvinoreva kuzviita munyika yakavanda yezviratidzo, kurangana uye manyowani ekutengesa akawanda.
Edgar Allan Poe Biography uye Akanaka Mabhuku
Kunyudza muEdgar Allan Poe's biography uye mabhuku akanakisa zvinoreva kuzviita mune rakasviba uye rinoonekera chiratidzo chizere nenyaya huru.
Biography uye akanakisa mabhuku aMiguel Delibes
Kuzvinyudza muhupenyu uye mabhuku ari nani zvinoreva kuzviita mune zvakasikwa zvemunyori seamuoni sezvaari akakosha mumabhuku echiSpanish.
Walter Scott. Mazhinji mafirimu anoenderana nemabasa ake
Walter Scott akasiya nyika ino ndokuva asingafi musi waGunyana 21, 1832. Nhasi ndinoongorora zvakanakisa zvemafirimu emabasa ake anozivikanwa.
Dhipatimendi Q naJussi Adler-Olsen. Series uye firimu shanduro
Dhipatimendi Q naJussi Adler-Olsen. Series uye firimu shanduro. Chikamu chechina mu cinema yeiyi Nordic nhema nhevedzano inosunungurwa. Faira 4.
Iyi sarudzo yaBarack Obama kuverenga kwekupera kwezhizha inosanganisira mamwe emazita akanakisa eAfrica uye mamwe anomutsa kufunga.
Ichi chiyeuchidzo chitsva chekuzvarwa kwaDH Lawrence, munyori wechiChirungu waLady Chatterley Anoda. Ini ndinoongorora iri basa kuratidza 15 mitsara.
Sirenas naLa novia gitana ndiwo mabhuku eatsotsi maviri ane fungidziro huru pachiitiko uye maviri akabudirira ekutanga opera naJoseph Knox naCarmen Mola.
Isabel Allende haasi iye chete anonyanya kuverengerwa munyori mupenyu muchiSpanish, asi murondedzeri wenyaya anochinjika sezvaari akasiyana.
Isu tinoongorora zvakasarudzika zveColombia Mubayiro weNobel muMabhuku kuburikidza nehupenyu uye mabhuku aGabriel García Márquez
Nyamavhuvhu ari kuuya uye isu tine zvinyorwa zvemashoko zvekugamuchira kuwa. Aya ndiwo mazita matanhatu emhando dzese dzevaverengi uye nemhando dzakasiyana dzemusoro.
Aya mabhuku akanakisa eEuropeanotsvaga munhoroondo uye shanduko yemagariro yekondinendi yekare kuburikidza nenyaya dzinonakidza.
Aya mafirimu akanakisa anoenderana nemabhuku anoita sarudzo dzakakwana zhizha remamuvhi ... kana kuverenga kukuru nedziva.
Aya mabhuku akanakisa akaiswa muCaribbean kubva kuna Bob Marley weJamaica kuenda kuna Gabriel García Márquez's inonyanya kudanana nyaya.
Nzvimbo muSpain dzinoonekwa mumabhuku
Idzi nzvimbo muSpain dzinowanikwa mumabhuku dzinotiendesa kuLa Mancha del Quijote kana kunoshamisa Baztán Valley.
Akanakisa Mabhuku Emangwana
Aya mabhuku epamberi epamberi anotisvitsa kune dystopian panorama inoonekwa kubva mumaonero evanyori vakasiyana saHuxley kana Wells.
Aya mabhuku ane magumo akanakisa munhoroondo anosimbisa simba reimwe nyaya kutibata kumatambo avo ekupedzisira.
Aya mabhuku akanakisa eMexico anosanganisira zvinyorwa zvinoratidzwa nemanzwiro eMexicoan Revolution kana mafungu akadai sekuita kwemashiripiti.
Harry Potter kana Daenerys Targaryen ndevamwe vatambi vanowanikwa mune aya akanakisa saga emabhuku munhoroondo yekunyudza.
Ivo Jo Nesbø vakatendeka vachiri nemhanza gore rino. Muna Gumiguru, Mugari wenhaka anozotengeswa uye muna Chikunguru 2019 Harry Hole anodzoka aine yake yegumi nembiri novel.
Kuenda kune dzimwe nyika, chokwadi cheMiddle East kana American paranoia ndiyo mimwe misoro yakataurwa nemabhuku aya akanakisa ezana ramakumi maviri nemasere.
Akanakisa akateedzana akavakirwa pamabhuku
Iyo Taremaid's Tale kana Open Open Maronda ingori mamwe eaya akateedzana akavakirwa pamabhuku ausingakwanise kupotsa muzhizha rino.
Zvakaoma kuverenga mabhuku
Kunyangwe paine chinzvimbo chavo semabasa makuru ezvinyorwa, aya mabhuku akaoma-kuverenga haagutsi nguva dzose vaverengi vese.
Aya ndiwo mabhuku enhoroondo nhanhatu nevanyori vatanhatu vakaita saJorge Molist, Sebastián Roa kana Carlos Aurensanz, David A. Durham, Javier Pellicer naEmilio Lara.
Bhuku regungwa, rakanyorwa nemunyori weNorway Morten Strøksnes, ndiro rakaburitswa remapepanhau richiratidza zvisikwa kubva kuchamhembe.
Nhasi uno firimu vhezheni reWona Iwe Kumusoro Ikoko, iro bhuku raPierre Lemaitre, anokunda Goncourt 2013, yaburitswa.Uku kwaive kuongorora kwangu.
Aya mabhuku akanakisa ane mifananidzo yevakuru kuverenga zvekare dzinozivikanwa nyaya uye anotipa iwo matsva ane mupiro wekuona anodzoreredza iyo rondedzero pfungwa.
Chikunguru anosvika, mwedzi wechinomwe wegore. Wongorora 7 yekunyora nhau. Kudanana, kuzvibatsira, komiki, kana nhoroondo. Novels yezvose zvido.
George Orwell angadai asvitsa makore zana negumi neshanu nhasi. Ini ndinorangarira chimiro chake nemitsara nezvidimbu kubva kumabasa ake 115 uye Kupanduka papurazi.
Akanakisa Mabhuku eAmerican Literature
Aya mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveAmerica anoongorora rusarura, huranda kana paranoia zvakadzokororwa munhoroondo yemoyo weWest.
Rashiya. 7 akakosha echinyakare ezvinyorwa zvake. Taverenga here?
Nhabvu World Cup irikuitirwa kuRussia. Nhasi ndinokumikidza chinyorwa ichi kune manomwe emabasa ake ekunyora.
Nhasi ndiri kutaura naLorena Franco, anofungidzirwa kuve mambokadzi mutsva weaya anonzi mudzimba nyowani. Anopindura mibvunzo gumi nerimwe pamusoro pebhuku rake uye nebasa rake.
Kune chero fan yeHondo Yenyika II, June 6 anoiswa pakarenda. Aya mabhuku matanhatu anofanirwa kuramba achirangarira iyo D-Day.
Ini ndinoongorora nyaya iyi yematsotsi nemunyori weIrish Ken Bruen nezveyeye mutikitivha uye gamba raJack Taylor. 3 akakosha mazita eiyo genre.
Francisco Narla ndomumwe wevanonyanya kutaura nyaya dzezvinyorwa zvekare uye ane nyowani nyowani, Laín el bastardo. Pindura mibvunzo gumi iyi.
Mune iyi gumi mibvunzo Gabriel Romero de devila anotiudza nezve ake mabhuku uye vanyori, zvaanoita, kuverenga kwake, zvirongwa zvake uye zvakaitika.
José Luis Sampedro. Kuongororwa kwemabasa ake kuburikidza nemitongo yake
Nhasi chiyeuchidzo chaJosé Luis Sampedro achiongorora mabasa ake kuburikidza nemitongo yake, mimwe nezve nzira yekusika uye vamwe nezve kunyora.
Pakati-pasi, zvinoitika zvejaya wizard kana zvakasikwa zvePratchett zvinokodzera mune inotevera sarudzo yemabhuku akanakisa ekufungidzira.
Zuva raamai. 6 mabhuku evanaamai emamiriro ese
Nhasi izuva raamai uye rimwezve gore ndinoda kukukorokotedzai. Ivo vese vanogona kuita zvese uyezve kuverenga. Aya ndiwo mazita matanhatu evanamai ezvese zvido.
Nhasi ndinopora imwe yenyaya dzangu dzekuyunivhesiti paIvanhoe, naWalter Scott, uyezve sanganisa zvishuwo zviviri senge zvinyorwa uye nhoroondo.
Chivabvu anotanga uye pakati pezvitsva zvitsva zvinoburitswa ini ndinosimbisa aya mashanu mazita. Kubva kuToni Hill, Carmen Mola, Lorenzo Silva, Peter Swanson naAntonio Manzini.
Kubva pazviitiko zveRamayana kusvika kune zvazvino mamiriro evakadzi munyika yeAsia, aya mabhuku akanakisa nezve India anoongorora kumeso kwakasiyana kweiyo ari mamwe emarudzi akasarudzika pasirese.
Nhasi uno zvinoratidza makore zana nemakumi matatu nematatu kubva pakazvarwa Rafael Sabatini. Kupemberera zuva rake rekuzvarwa pane dzimwe nyaya dzake nemashanduro avo pachiratidziri.
Shakespeare's Macbeth. Evhangeri muhukama hwaBanquo naMacbeth
Ichi chaive chinyorwa changu chekoreji paMacbeth. Kunyanya, zvaive zvehukama pakati paMacbeth neBanquo uye nemabatirwo ainoitwa pabasa rese.
Kufa handiko kunonyanya kurwadza ndiyo yekutanga runyorwa nemunyori mutsva, Inés Plana, uye iri munzira yekuva imwe yekutengesa kwepamusoro kwegore. Kurohwa kwakadai nefirimu yekutanga chinhu chisina kujairika.
Zuva reBhuku riri kuuya. Ndeapi mabhuku asina pfungwa dzevanyori ivavo? Heano makumi matatu evari vatinogona kugovera kana kwete. Ngationei.
Macbeth. Kushuva, simba uye kupenga zvinoenderana naJo Nesbø
Jo Nesbø anofukidza Macbeth. Mapurisa ane huwori, makasino, madhiragi, mabhasikoro uye vatengesi varoyi muguta rinonaya uye nerima risingagumi kuma70s.
Musi waApril 4, munyori weBasque Jon Arretxe aive muAranjuez. Akatitaurira zvinhu zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa rake. Aya aive mamwe.
Tsvaga ese mabhuku emunyori mukuru uyu. Pakati pebhuku raLaura Gallego tinowana magamba ane masimba, shongwe dzisinganzwisisike kana mamonk anotsvaga kuponesa nyika.
Kubvumbi, mwedzi wemabhuku. Kuvhura aya mazuva makumi matatu saka zvinyorwa ini ndinonyora nhevedzano yemitsara uye pfungwa nezvavo.
Kubva kuna García Márquez kuenda kuFar East, tinoongorora mabhuku akanakisa munhoroondo aunofanira kuverenga kamwe chete muhupenyu hwako.
Vadi venhoroondo yenhau vanozowana mumabhuku aMatilde Asensi zvakavanzika, kurangana uye kurangana kubva kumativi ese epasi. .
Idzi dzakanakisa nyaya munhoroondo dzinosimbisa simba rezvinyorwa zvipfupi kubva kune vamwe vevanyori vepasirese zvakanyanya munyika yetsamba.
Rimwezve gore tinopemberera Zuva rababa munaKurume 19. Uye rimwezve gore ndinosarudza sarudzo yemazita evakuru nevana, vanababa uye kwete vanababa, vanamai nevana pamusoro pavo.
Ides yaKurume. Mabhuku nedzimwe nyaya na uye nezvaJulius Caesar
Iwo maIdhi aKurume, zvinoenderana nekarenda yeRoma. Uye pazuva rakadai nhasi rangano raBrutus nedzimwe nhengo dzeSeneti yeRome dzakapera nekuurayiwa kwaGaius Julius Caesar. Ini ndinoongorora mamwe mabhuku ne uye pamusoro peiyi yakakosha nhamba munhoroondo yeHumanity.
Edmundo Dantés, iye asingafi Count weMonte Cristo uyo akasika Alexander Dumas, anga aine zviso zvakawanda mufirimu rake uye terevhizheni. Ava vatanhatu vavo.
Mabhuku manomwe akakunda iyo Oscar yefirimu yepamusoro
Rimwezve gore nhasi tine musangano nema Oscars Awards pahusiku hwakakosha mu cinema. Isu takaongorora mabhuku manomwe akachinjirwa kuchiratidziro chikuru ndokuhwina iyo Oscar yefirimu yepamusoro.
Mwedzi mutsva, zvitsva zvinoburitswa. Kurume kuvhura neazvino naVargas Llosa kana Pamuk, naLackberg naFerrante, naIzaguirre naBarneda. Uye pamwe neIbáñez huru. Chishoma chezvose kune wese munhu.
Anonakidza mabhuku kurudziro: "Ndangariro dzeIdhún" naLaura Gallego
Nhasi, muchinyorwa chedu pane zvekunyora kurudziro tinokuunzira inonakidza mabhuku kurudziro: "Zviyeuchidzo zveIdhún" naLaura Gallego.
Gore reChinese Nyowani rave kupembererwa, gore reImbwa. Ini ndinoongorora zvekare, zvekare uye nhema mazita pamusoro penyika huru uye inonakidza yekumabvazuva.
Muchinyorwa chedu nhasi tinokuunzira pfupiso yebhuku "Guta nembwa" naMario Vargas Llosa. Wakamboiverenga here?
Jean-Baptiste Adamsberg, anoshamisa muchengeti wechiFrench akagadzirwa naFred Vargas, anodzoka mune zita idzva remutsara, Panobuda kubuda. Tinorangarira nyaya dzavo.
Muchinyorwa chanhasi tinokuudza kuti munyori Alberto Conejero anonyora kupera kwebasa raLorca risina kupera. Ichaburitswa muMadrid.
Tiri muCarnival. Zvipfeko, mapato, kusazvibata, kunakidzwa uye kuverenga. Isu tinotarisa kune aya manomwe mabhuku apo macarnival ari protagonists munzira dzakawanda.
Iyo Hogarth Shakespeare chirongwa chakatanga muna2014 nechinangwa chekunyora zvekare maChirungu bard mabhuku evateereri vezana ramakumi maviri nemasere. Chakanga chiri chikamu chekupemberera kwegore rechimakumi mana rekufa kwake muna 400. Ava ndevamwe vevanyori vanovhara mabasa ake.
Nhasi uno quintessential English novelist, Charles Dickens, anotendeuka makumi maviri nematanhatu. Mukurangarira ndangariro yake nebasa rake rakakura uye rakakosha, ndinorangarira mamwe emitsara mumabasa ake.
Don Vicente Blasco Ibáñez ari kupemberera zuva rake rekuzvarwa nhasi. Iye akazvarwa muna Ndira 29, 1867 muValencia. Kupemberera ndinounganidza mamwe mitsara kubva kumabasa ake anomiririra.